Home Uncategorized क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिद्वारा आत्महत्या
तनहुँ । जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिकाका एक ४९ वर्षीय व्यक्तिले मङ्गलबार राति आत्महत्या गरेका छन् । भारत रोजगारीमा गएका उनी गत असार ४ गते घर आएका थिए । शुरुमा उनलाई सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राखिएको भए पनि भाग्ने प्रयास गरेका थिए ।
गाउँपालिकाले त्यसपछि सुरक्षित स्थान चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा राख्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । हाल उक्त क्वारेन्टिनमा चार जना बाँकी छन् ।
‘ती व्यक्तिमा मानसिक समस्या रहेको जानकारी पाएको छु’, उनले भने, ‘घटनाको जानकारी पाएलगत्तै यहाँबाट एक प्रहरी टोली पठाइएको छ । सुरक्षितरूपमा शव व्यवस्थापन गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी टोलीसमेत घटनास्थल पुगेका छन् ।’
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - January 19, 2021 0
Editor-Picks महेश्वर गौतम - January 13, 2021 0
पूर्णभक्त दुवाल - March 31, 2020 0
काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने...
प्रदेश ओपेन्द्र बस्नेत - March 4, 2020 0
अध्यादेशले प्रवेश पाएन मन्त्रिपरिषदमा
राजनीति राजधानी समाचारदाता - December 18, 2020 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चा र विवादमा रहेको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश फिर्ता सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छैन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका विषयमा...
प्रदेश २ एम के माझी - July 16, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - July 22, 2020 0
काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिराका कारण मुलुकका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गका एक सय बढी स्थानमा क्षति पुगेको छ । वर्षापछिको बाढीपहिराका कारण क्षति पुगेका...
नेपाल फाइनान्समा दुई जना संचालक नियुक्त
अर्थ राजधानी समाचारदाता - August 1, 2020 0
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्स कम्पनी लि. को रिक्त रहेको दुई संचालक नियुक्त भएका छन् । सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै पानस इनभेष्टमेन्ट प्रा.लि.को तर्फबाट रोजीना...
Exclusive राजधानी संवाददाता - January 18, 2021 0